Wararka - Sidee loo doortaa muraayad? Sidee naqshadeeyayaashu ugu talin karaan milkiilayaasha?
Aqoon isweydaarsiga wax soosaarka
Nalalka iyo Iftiinka iftiinka
Sidee loo doortaa muraayad? Sidee naqshadeeyayaashu ugu talin karaan milkiilayaasha?
Chandeliers sida nalalka qurxinta qurxinta ee caanka ah ee lagu dhejiyo saqafyada meelaha gudaha, waxay caan ku yihiin meelaha gudaha iyo kuwa sare leh (hudheelada, hoolalka diyaafadaha waaweyn, iwm.) U-doodista aan lahayn laambad weyn sannado badan kama horjoogsanayso dadka isticmaala inay jecel yihiin laambadaha waaweyn - nalka.
Marka, sidee ayay naqshadeeyayaashu ugula talin karaan nashqadeeyayaasha ku habboon milkiilayaasha?
Ugu horreyntii, dooro hab qaybinta nalka ku habboon iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah, maxaa yeelay hababka kala-qaybinta iftiinka ee kaladuwan waxay heli karaan saameyn iftiin oo kala duwan. Gaar ahaan meheradaha ganacsiga, muraayaduhu waa inaysan fiiro gaar ah u lahayn qurxinta oo keliya, laakiin sidoo kale inay si buuxda u tixgeliyaan shuruudaha shaqada.
Marka labaad, ku xulo habka kor u qaadista iyadoo lagu saleynayo qaab dhismeedka booska iyo doorbidka shaqsiyeed. Tusaale ahaan, saqafyada guddiga gypsum qaarkood kuma haboona isticmaalka nalka. Sababaha maadiga ah ayaa si fudud u horseedi kara dildilaac iyo cillad.
Qaabka naqshadeynta muraayaddu sidoo kale waa inuu ahaadaa mid fiican, waxaa ugu wanaagsan in laga tarjumayo qaabka guriga loona soo bandhigo milicsiga milkiilaha.
Xaqiiqdii, laambadaha iyo qaababka naqshadeynta waa sida dumarka iyo dharka. Dhammaantood waxay u baahan yihiin in si macquul ah oo taxaddar leh loo waafajiyo. Iska ilaali iswaafajinta "qasabka ah"
Markii lagu hirgeliyo mashruuc gaar ah, laba dhibaato oo caadi ah ayaa lala kulmi doonaa:
(1) Immisa shaandheeyeyaal ayaa ku habboon?
Aynu soo qaadanno miiska cuntada ee guriga tusaale ahaan:
Marka tirada qadeeyayaashu yaryihiin oo miiskuna uu yaryahay: waxaa lagugula talinayaa inaad miiska dushiisa ku xidhato dhexroor dhererkiisu yahay 1.2m — 1.5m si loo hubiyo dhalaalka iyo jawiga cuntada.
Dabcan, haddii miiska cuntada uu ka weyn yahay 2m dhexroor, waxay ka dhigan tahay in boosku yahay mid madhan. Waqtigaan, aalado waaweyn ama nal yar oo dhowr ah ayaa loo baahan yahay in la beddelo si loo daboolo baahiyaha iftiinka.
(2) Sidee loo ogaadaa dhererka ka joojinta?
Tusaale ahaan u soo qaado miiska cuntada ee guriga. Dhererka laalaadda ee shaashadda waxaa lagugula talinayaa inuu ku dhowaado 700mm miiska korkiisa, mana aha inuu aad u sarreeyo ama aad u hooseeyo. Dhererkani wuxuu hubin karaa inaanan saameyn ku yeelan isgaarsiinta caadiga ah inta aan fadhinno.
Isla mar ahaantaana, dhererkan ganaaxani wuxuu la jaanqaaday dhererka miiska cuntada (750mm-780mm), si aragtida dadka iyo dhererka jirku u siman yahay marka la taagan yahay, mana sahlana in la arko iftiinka iftiinka ee sheyga, laakiin sidoo kale wuxuu ka dhigi karaa iftiinka diiradda miiska.
Waqtiga boostada: Nofeembar-23-2020
Naqshadeynta Nolosha Nolol fudud oo kuu Keenso waxaad u Baahan Tahay